Nhau - Nei tsika bhegi kugadzira iine "MOQ"?
Sei tsika mukwende kugadzira "MOQ"?
Ini ndinotenda munhu wese achasangana nedambudziko rehuwandu hwehuwandu hwehuwandu paanotsvaga vagadziri kuti vagadzirise mabhegi esaga. Nei fekitori yega yega iine chinodikanwa cheMOQ, uye chii chakaringana hushoma hwehodhi mumabhegi ekugadzirisa indasitiri?
Iyo shoma odha huwandu hweyakagadzirwa-akagadzirwa mabhegi anowanzo gadzirirwa pa300 ~ 1000. Iyo yakakura fekitori, iyo inowedzera yakaderera huwandu hwehuwandu hwehuwandu. Pane zvikonzero zvikuru zvitatu.
1. Zvishandiso. Iyo fekitori painotenga mbishi zvinhu, pane zvakare padiki pehuwandu hwehuwandu hwekumanikidza. Chinyorwa chikuru chinowanzo kuve neashoma odha huwandu hwemamita mazana matatu (angangoita mazana mana mabhegi anogona kuitwa). Kana iwe uchingogadzira mabhegi mazana maviri, ipapo mugadziri anofanira kuramba ari Inventory zvigadzirwa zvemabhegi anotevera mazana maviri;
2. Zvinodhura zvetsika zvigadzirwa zvehombodo uye kuvandudzwa kwemasaga, kunyangwe iwe uchigadzira 100 kana 10,000 mabhegi. , iyo yakawanda kudhura kugovana;
3. Mutengo wekugadzirwa kwemazhinji emasaga akagadzirwa: Mabhegi aya mashandiro emanyorero. Izvo zvidiki huwandu, zvinononoka kumhanya kwevashandi vekugadzira. Kungoziva nezve maitiro, zvapera. Mari yevashandi yakanyanya kukwirira.
Naizvozvo, iyo MOQ yakabatana nemutengo. Nezve bhegi rimwe chete, kana iwe ukagadzira zana, iwo mutengo mumwe unenge uri ka2 ~ katatu zvakapetwa kupfuura chiuru.